ग र्भवती महिलालाई किन लाग्छ ‘वाकवाकी’? – Jagaran Nepal
ग र्भवती महिलालाई किन लाग्छ ‘वाकवाकी’?
काठमाडाैँ। सामान्यतया गर्भावस्थामा महिलाहरुलाई वाकवाकी लाग्ने गर्दछ । यो हरेकजसो महिलाहरुमा देखिने समस्या हो । यस्तो किन हुन्छ त ? चिकित्सकहरूका अनुसार, गर्भावस्थामा महिलामा आउने एचसिजी हर्मोनका कारण वाकवाकी र रिंगटा लाग्ने गर्दछ ।